होस्टेलको बसाइ : सुविधायुक्त तर कति सुरक्षित ?
विराटनगरकी मन्दीपा पोखरेल लोकसेवा आयोगको परीक्षा तयारीका लागि एक महिनाअघि काठमाडौं आइन्। तर, काठमाडौंमा कहाँ बस्ने भन्ने समस्या भयो। छोटो समयका लागि आएकी उनका लागि भान्सादेखि बेडरुमसम्मको सबै सरजाम मिलाउनु सहज थिएन। त्यसैले एकजना साथीको सल्लाहमा होस्टेलमा बस्न थालिन्।
मासिक ९ हजार रुपैयाँ बुझाएपछि होस्टेलमा खाना, खाजा र बस्न पाइन्छ। लुगा धुनेदेखि कोठा सफा गर्ने झन्झट पनि छैन। त्यसैले पूर्णकालीन विद्यार्थी बन्न पाएकी छन् उनी। “बिहान क्लास जान्छु, फर्किंदा खाना तयार भइसकेको हुन्छ। त्यसपछि फेरि मज्जाले पढ्छु,” होस्टेलमा बसेपछि कतैबाट पनि पढाइमा अवरोध नआएको उनको अनुभव छ।
उनी जस्तै लोकसेवाको तयारी गरिरहेका विद्यार्थी मात्र होइन, थुप्रै विद्यार्थी र विभिन्न कामले अलिक लामो समय काठमाडौं बस्नेहरूको पहिलो रोजाइ बनेको छ होस्टेल।
नेपाल होस्टेल एसोसिएसनका अध्यक्ष चेतन दाहालका अनुसार काठमाडौंमा खुलेका निजी होस्टेलले एक व्यक्ति बराबर मासिक रु.७ हजार देखि रु.११ हजारसम्म शुल्क लिन्छन्। यो शुल्कमा एउटा बेडरुम, खाना, खाजाको सुविधा पनि पाइन्छ। शुल्कअनुसार खानपिन तथा अन्य सुविधामा फरक पर्छ।
अध्यक्ष दाहालका अनुसार एसोसिएसनले प्रतिव्यक्ति मासिक न्यूनतम नौ हजार शुल्क तोकेको भए पनि बजार प्रतिस्पर्धात्मक भएकाले केही होस्टेलहरूले मासिक ६ हजार रुपैयाँसम्म शुल्क लिने गरेका छन्। यस्ता होस्टेलहरूको सुविधा भने गुणस्तरीय नहुने उनको दाबी छ।
दाहालका अनुसार दिनको रु. ३५० शुल्क लिँदा दैनिक चार पटक खाना र आवासको सुविधा दिन सकिन्छ।
एसोसिएसनले सुविधाका आधारमा होस्टेलको वर्गीकरण नगरेको उनी बताउँछन्। उनी भन्छन्, “सरकारले नै होस्टेलसम्बन्धी नियम–कानुन बनाएको छैन, मापदण्ड पनि तोकेको छैन त्यसैले हामीले आफूखुसी वर्गीकरण गर्न मिलेन।”
नेपाल होस्टल एसोसिएसनमा आबद्ध भएका काठमाडौं उपत्यकाभरका होस्टलको संख्या ५४० छ। सबै होस्टेलहरू एसोसिएसनमा आबद्ध छैनन्। दाहाल उपत्यकामा मात्रै करिब एक हजार होस्टेल सञ्चालनमा रहेको अनुमान गर्छन्।
होस्टेल सञ्चालनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएको हुनुपर्छ। होस्टेलको बसाइ सहज भनिए पनि केही होस्टेलहरूमा भने बासी खाना खुवाउने गरेको, पर्याप्त खाजा नदिने गरेको जस्ता गुनासा पनि सुनिन थालेका छन्।
त्यस्तै केही होस्टेलहरूमा लागूऔषध भेटिएपछि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका कृष्णबहादुर कटवाल बताउँछन्।
एसोसिएसन अध्यक्ष दाहालका अनुसार पुरुष र महिलाका लागि बेग्लाबेग्लै होस्टेल हुन्छन्। काठमाडौंको एउटा होस्टेलले महिला र पुरुषलाई एउटै होस्टेलमा राख्ने गरेको थाहा पाएपछि उक्त होस्टेललाई कारबाही भएको उनको भनाइ छ।
होस्टेलका लागि नियमनकारी निकाय नहुँदा एकातिर होस्टेलको मापदण्ड तोक्न, नियमन र अनुगमन गर्ने काम हुन सकेको छैन भने अर्कोतर्फ सुरक्षाको प्रश्न पनि टडकारो रुपमा उठ्न थालेको छ। धेरै जसो होस्टेलले सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाएको भए पनि होस्टेलको बढ्दो संख्या र नियमनकारी निकाय नहुँदा होस्टेलहरूमा गैरकानुनी र अवाञ्छित गतिविधि भइरहेका गुनासा पनि आइरहन्छन्।
होस्टेलमा बस्नेहरू दुर्व्यसनमा लाग्ने र उनीहरूले देखाउने असामाजिक क्रियाकलाप पनि समस्याका रुपमा रहेका छन्। नेपाल प्रहरी स्रोतका अनुसार ‘गर्ल्स होस्टेल’ मा बस्ने युवती बिहानबेलुका होस्टेलमा बस्ने भए पनि दिनभर उनीहरू कहाँ जान्छन् के गर्छन् भन्ने सूचना सञ्चालकसँग नहुँदा पनि समस्या थपिएको छ।
एक्ला पुरुष वा महिला तथा विद्यार्थीका लागि होस्टेल उपयुक्त भए पनि न्यून आय भएका परिवारका लागि भने होस्टेल नै समस्या बनिदिएका उदाहरण पनि छन्।
काठमाडौंको कालिकास्थान बस्दै आएका कृष्णबाबु तिवारी राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणीका कर्मचारी हुन्। लमजुङका स्थायी बासिन्दा तिवारी काठमाडौंमा डेरा गरी बसेको १३ वर्ष भइसकेको छ। चार वर्षदेखि पुतलीसडकमा बस्दै आएका उनलाई केही महिनाअघि घरबेटीले एक्कासी कोठा सर्न भने।
दुई सन्तान र श्रीमतीसहित अर्को डेरा सर्न उनलाई निकै सकस भयो। घरबेटीले उनी डेरा गरेको सम्पूर्ण घर नै होस्टेललाई भाडामा दिन लागेका रहेछन्। त्यसैले कालिकास्थानको साँघुरो कोठामा सरेको छ तिवारीको परिवार। “अलिक फराकिलो खोज्ने हो भने एक महिनाको तलबले नपुग्ने रहेछ,” तिवारी भन्छन्।
बानेश्वरमा बस्दै आएकी शिक्षिका रीना मगरको समस्या पनि तिवारीको भन्दा कम छैन। तीन वर्ष अवधिमा उनी भाडामा बसेका घरमा एक एक गर्दै होस्टेल खुल्न थालेपछि उनको तीन जनाको परिवारले तीन पटक डेरा सरिसकेको छ।
“होस्टेल सुरू नहुँदा खोज्न हिँडेको एक–दुई घण्टामै राम्रा उज्याला कोठा सजिलै पाइन्थे। अहिले अलिक राम्रो घर देख्यो कि होस्टेलले लिइहाल्दा रहेछन्,” रिना भन्छिन्। काठमाडौंको बानेश्वर, बिजुलीबजार, पुतलीसडकमा मात्र करिब ३०० होस्टेल सञ्चालनमा रहेको एसोसिएसनका अध्यक्ष चेतन दाहाल बताउँछन्।